Ultrasound Probe Disinfector (Ọkpụkpọ Ultrasound Probe Disinfector)
DONEAX Smart Pulsed Ultraviolet Disinfection Robot, ngwa agha ohuru maka igbochi na njikwa nke ụlọ ọgwụ!
Ka okpueze ohuru ohuru ji nwayọ abanye na mgbochi na njikwa, maka okpueze ohuru, nke na-eji ụmụ irighiri mmiri na kọntaktị dị ka isi ụzọ mbufe, usoro kachasị mkpa iji gbochie ụzọ nnyefe ya gụnyere itinye ihe nkpuchi, ikuku, na ịdị ọcha aka, dịka ọma ...
A na-eji robot disinfection na sterilization robot DONEAX iji gbuo nje na igbu nje, nje bacteria na superbacteria iji meziwanye ịdị ọcha gburugburu ebe obibi.
“Ndị ọrịa a na-enweta ọgwụgwọ ebe a na-arịakarị ọrịa n’ihi ọgwụgwọ ma na-ebute ọrịa ndị na-efe efe. Micromụ nje ndị na-ebute ọrịa na-aghọ ndị nwere ọgụgụ isi na ọgwụ mgbochi na-eguzogide ọgwụ, nke mere na anyị chọrọ ngwa agha ọhụụ dịka teknụzụ DONEAX doneax's pulsein s ...
Coronavirus nke a na-ede akwụkwọ, ngwakọta ngwaahịa DONEAX, nwere ike iguzogide 2019-nCoV site na ikike.
Coronavirus nke a na-ede akwụkwọ, ngwakọta ngwaahịa DONEAX, nwere ike iguzogide 2019-nCoV site na ikike. Akwụkwọ akụkọ coronavirus ka oyi baa nchoputa na ọgwụgwọ atụmatụ na oru na February 3rd n'ehihie (National Defense Health Committee) (ikpe mbipute nke ise). The usoro ngwaahịa nke Shenzhen DONEAX technolog ...
Na-amụ banyere ngwa nke | pulse ultraviolet disinfection robot na-anọpụrụ iche iche ụlọ ọgwụ
Novel coronavirus ka oyi baa emeela ka ndị mmadụ nwee nghọta miri emi banyere oke nsogbu nke ọrịa na-efe efe na ọha mmadụ kemgbe ọnwa Disemba afọ gara aga. Isi ihe na igbochi ọrịa na ịchịkwa ọrịa zuru oke bụ ime nke ọma na igbochi ọrịa na ịchịkwa ọrịa ma mee ka ndị na-adị ọcha ...
Nkà na ụzụ ọhụụ - na-akwado ụlọ ọgwụ - usoro DONEAX nke teknụzụ emeela nnukwu ọganiihu
Innovation teknụzụ na-enyere echiche nke ụlọ ọgwụ Na Disemba 20, 2019, "nzukọ agụmakwụkwọ kwa afọ na nzukọ ntuli aka nke ise nke ọrịa ụlọ ọgwụ Ọkachamara Kọmitii nke Shenzhen Medical Association" nke Shenzhen Medical Association na Shenzhen University Ge ...
Aslọ ọgwụ Huashan dị na Shanghai webatara DONEAX ọkwa ikuku ikuku dị elu iji chebe ndị ọrụ ahụike
Ebe ọ bụ na ntiwapụ nke akwụkwọ coronavirus ka oyi baa, nucleic acid nchọpụta aghọwo ihe dị mkpa iji enyocha ikpe. N'oge a, nchọpụta acidic aghọwo usoro dị mkpa maka nyocha miri emi na ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. Ihe mejupụtara nke ndị ọrụ na mpaghara a bụ ihe mgbagwoju anya ...
DONEAX teknụzụ pulsed UV disinfection robot wepụrụ Shenzhen Health Supervision Bureau
Ọrịa Coronavirus na-agbasa n'ime ogologo oge, mgbochi na njikwa sayensị abụrụla ihe kacha mkpa. Na Jenụwarị 31, 2020, Shenzhen Municipal Health Supervision Bureau na-ebufe ngwa ngwa igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke Shenzhen Don mepụtara ...
DONEAX usoro disinfection ngwaahịa na-abanye na ngalaba ngalaba ọgwụ ultrasound nke kọleji asatọ nke CUHK iji nyere ụlọ ọgwụ aka ịchịkwa njikwa!
Ọrịa corovavirus ọhụrụ ahụ na-atụghị anya na mberede mere ka ọrịa ụlọ ọgwụ na-achịkwa ọnọdụ dị mkpa nke mmepe. Dị ka ngwa nyocha na-ahụkarị na ụlọ ọrụ ahụike, nyocha ultrasonic na-ahụkarị na akpụkpọ ahụ ma ọ bụ akpụkpọ anụ mucous nke ndị ọrịa ozugbo ma nwee nnukwu nu ...
Emere Changsha Construction Expo nke ọma, DONEAX usu disinfection robot nyekwara ihe ngosi ahụ na mgbochi ọrịa!
On May 15-17, nke 12 Central China (Changsha) ọhụrụ ụlọ ihe ulo oru mbo nkwalite na dum ụlọ customization Expo (nke a na-ezo aka Changsha Construction Expo) na isiokwu nke "ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ na-emeri-mmeri mmepe" ẹkenịmde ke Changsha International ...
Ngwa nke robotic ultraviolet disinfection robot na ọgwụ disinfection nke ụlọ ọgwụ
Njedebe nke disinfection bụ ụzọ dị irè maka disinfection nke na-ebute ọrịa na-efe efe na isi ọrịa. Dika akwukwo ohuru coronavirus si aru oru na ntuziaka, uzo aghaghi agha imejuputa ihe ohuru ohuru ohuru nke coronavirus.